पात हल्लिन्छ, सरकार हल्लिदैन: सरकार प्रवक्ता
काठमाडौ,(प्रस): सरकारले काम गरेन भनेर भडुवा तर्क नगर्न सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आग्रह गरेका छन्। दुई तिहाइको सरकारले काम गरिराखेको उल्लेख गरेका उनले सिट नै नपुग्नेहरूले सरकार हल्लियो भनेर भडुवा तर्क गरिराखेको आरोप लगाए।
काठमाडौंमा सोमबार भएको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रीको त कुन्नी के-के भनिराख्छन् नि! आजै छैन, भोलि छैन, पर्सी छैन भन्छन्। तपाईं (बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई) त ढुक्क। यो बोर्डको जन्मदिन हो कि केशव भट्टराईको प्रशंसा दिवस हो? धेरैले आशा गरेका रहेछन्।’
बाँस्कोटाले आफू पनि ढुक्क रहेको बताए।
‘तपाईं पनि ढुक्क, हामी पनि ढुक्क फेरि,’ उनले भने, ‘कसैले भनेर पनि हुँदैन, दुई तिहाइ एउटाको छ। अब अर्काले बीचमा, रूखमा बसेर हल्लाएर हल्यो, हल्यो जरै सुद्ध हल्यो भनेर क्यार्ने? पातमात्रै हल्लिन्छ। पुग्दैन अर्काको सिट। भडुवा तर्कतिर नलागौं, काम गरौं।’
उनले चलचित्र क्षेत्रमा गएको वर्ष वक्स अफिस राख्नेलगायत काम भएको बताए।
उनले चलचित्रका लागि गतिलो कानुन बनाउने, भवन बनाउने र छायांकनका लागि पनि काम गर्ने उल्लेख गरे।
सरकारले आइफा सञ्चालन गर्न एक सुका पनि बजेट नदिएको उनले दाबी गरे।
‘जसले सम्झौता गर्ने हो गर्छौं भनेपछि सरकारले स्वीकृति छ भनेको हो,’ उनले भने, ‘एक सुका दिएको छैन। यहाँ त जुलुस निकाल्ने डर भइसक्यो।’
आइफा (इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड) कार्यक्रम गरिहालेछन् भने पनि नेपालका लागि राम्रो हुने उनले बताए।
उनले भने, ‘आइफाको सट्टा एन्फा हुँदैन? कि हुँदैन? हुन्छ भने हामी पनि गरिदिउँ। सहयोग गर्ने सबै लागौंला।’
Times 995729	Visited.